"Zolsky nduku". Na-eto eto nduku na-enweghị nje - Journal "Nduku System"
LLC "Zolskiy nduku" hiwere na 2011, ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na-eto eto nri na mkpụrụ poteto nke nnukwu mmeputakwa.
A na-arụ ọrụ ahụ na mpaghara ugwu na ugwu ugwu nke Kabardino-Balkarian Republic. Achọpụtaghị ebe a na ndapụta. N'ebe dị elu nke 1000-2000 mita karịa elu oke osimiri, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ ahụhụ ọ bụla nke na-ebute ọrịa nduku nje. Ọdịdị na-efe efe dị ala nke ugwu ugwu na-enye ohere iji agrochemistry ruo n'ókè dị nta, nke na-eme ka ngwaahịa ndị ahụ nwee mmekọrịta gburugburu ebe obibi.
A na-egbute ihe karịrị tọn 200 nke ihe ọkụkụ site na mpaghara nke hectare 5, ma ụdị ọhụrụ na nke egosirilarị na ngwakọ nke poteto.
N'oge a na-eto eto, ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ na-eme mkpocha phyto na nke dịgasị iche iche, a na-eji aka ewe ihe ubi. Ejiri nlezianya họrọ ihe ubi a kụrụ wee mee ka ọ dị nha.
Ejiri ụlọ ọrụ ahụ mee ụlọ nyocha maka ịkọpụta minitubers. A kwadebere ya na osisi hydro-aerial, nke na-abawanye mkpụrụ okpukpu iri. Na 2017, site na enyemaka nke Ministry of Agriculture nke KBR, Zolsky Potato LLC kwalitere griin haus maka ndị na-eto eto minitubers.
Kemgbe afọ 2018, "Zolsky Potato" na-esonye na ntinye nke ọrụ sayensị na teknụzụ zuru oke "Mmepụta nke ụdị mkpụrụ poteto dị elu nke asọmpi anụ ụlọ asọmpi na gburugburu ebe nje na-enweghị nje nke mpaghara ugwu nke Kabardino-Balkarian Republic" (dị ka akụkụ nke subprogram "Mmepe nke ịzụlite nduku na mkpụrụ mkpụrụ na Russian Federation" -ihe omuma maka mmepe nke oru ugbo maka 2017-2025). Ya na ndị mmekọ sayensị, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na okike nke ụdị poteto anọ ọhụrụ.
Ọrụ kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ imeziwanye ogo ma bulie ọtụtụ ngwaahịa toro.
Dị iche iche Zhukovsky n'isi
Impala iche iche
Red Scarlett dịgasị iche iche
Luck dịgasị iche iche
Atụmatụ ndị a gụnyere ịmepụta nnukwu mkpụrụ mkpụrụ na mmepe mmekọrịta na mba ndị ọzọ.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ ụlọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị https://zsk07.ru/ ma ọ bụ na netwọk mmekọrịta https://www.instagram.com/zolskiy_kartofel/
Ikike nke Mgbasa Ozi
Tags: "Zolsky nduku"nduku na-etoKabardino-Balkaria
Na mpaghara Novgorod, nsonaazụ mmalite nke mmejuputa iwu nke ọrụ mpaghara mpaghara kacha mkpa "Mmepe nke mkpụrụ mkpụrụ nduku"
MOLYANOV AGRO GROUP: Nkwa dị iche iche nke poteto